Waa Maxay Cudurka Cabeebku (FMD)? | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
Nasiibkii Telefonka Iyo Noloshii Ka Danbaysay
Cudurka cabeebku waa mid ku dhaca Lo’da, Doofaarka, Idaha, Riyaha iyo Buufalada, sidookalane waa cudur dadka usoo gudba.
Xanuunkan waxaa keena cudur dhaliyaha loo yaqaan fayras-ka, gaar ahaan nooca “Aphtho virus” haddaba waxa jira todobba nooc oo jeermiskani leeyahay mid kastaana xanuunka gaar ahaantiisa u sababo sida (Nooca A,O,E, Asia,South 1,2,3) mid kastaana waxa uu leeyahay tallaal u gaar ah oo lagaga hortegi karo.
Cudurkani nuuc kasta oo xoolaha kamid ah waxa uu usaameeyaa si gooni ah, xayawaan walibana waxaa kazoo muuqdo calaamado goni ah, sida lo’da oo ah xoolaha ugu badan ee astaamihiisa lagu arki karo, doofaarka oo ah xanuun fidiyaha ugu badan wakhtiga uu jeermisku jidhkiisa ku jiro, nooca ugu dambeeya oo ah Adhiga (Idaha iyo Riyaha) wax astaamo ah ma muujiyaan inta uu xanuunkani jidhkooda ku jiro, sidaas awgeed isla waqtigaas waa ay gudbiyaan xanuunka iyaga oo aanay wax astaamo xanuun ahi ka muuqan, waana xoolaha ugu khatarta badan maaddaama oo aan laga dareemi karin cudurka.
Haddaba xanuunkani waxa uu ku gudbaa hawada tooska ah, taabashada neefka xanuunkan qaba, calafka wasakhaysan iyo waliba wakhtiga xoolaha lagu samaynayo gacan ku rimiska (Artificial insemination).
Cudurkani waxa uu ku dhacaa xoolaha aynu hore u soo xusnay, meelaha uu jidhkooda ka muuqan karaana ay tahay lugaha iyo afka xoolaha.
Mar haddii la aqoonsado calaamadahan oo ah kuwa ugu badan ee xanuunkani caanka ku yahay waxa habboon in la hubiyo wakhtiga ugu badan ee xanuunkani uu astaamo ku keeni karo, taas oo ah ay 1-2 cisho.
Waliba iyada oo lagu lifaaqayo taas in loo eego cimilada deegaanka ee uu xanuunkani ka soo if-baxay in ay tahay cimilo qabaw, taas oo uu ku tarmi karo fayras-kani.
Waxa si rasmi ah loogu xaqiijin karaa in la qaado shaybaadh laga qaaday dheecaannada nabarada ama dhiigga nooca shaybaadh ee xanuunkan lagu ogaado, kaas oo loo yaqaano (Elisa Test) ama shaybaadhka deg-dega ah ee la dhaho (FMD NSP AB test).
Cudurkani sida saxda ah waa cudur uu keeno cudur dhaliyaha jeermiska (virus), sida la ogyahay ilaa hadda wax daawo ah looma diyaarin cudurada noocan ah dunida.
Haddaba waxa muhiim ah si loo yareeyo dhibaatada fiditaan ee jeermiskani leeyahay, in la raaco talaabooyin kaan hoose:
Fayras-ka cudurkan keena waxa uu ku fidaa cimilada qabaw, laakiin waxa uu ku dhintaa heer kulka ka sarreeya 56C” sidaas darteed waxa muhiim ah in kor loo qaado jawiga kulayl ee xerada iyo xoolaha xanuunku hayo.
jeermiskan waxa lagu yarayn karaa fiditaankiisa dareerayaasha asiidha(acid-ka) ah, sidaaas darteed waa in bukaanka loogu dadaalaa in cuntooyinka loo raaciyo asiidhada aan khatarta lahayn.
In nabarada si joogto ah loo nadiifiyo isla markaasna daawooyinka asiidhiga ah loogu maydho, si looga hortago in ay bakteeriyadu ka faa’idaysato.
In neefka xumadda laga jabiyo si aanay dhiig yaraani ugu raacin xanuunka.
Ugu dambayn xanuunkani waxa uu leeyahay tallaal ka hortag ah, haddaba waa in marka hore la ogaado nooca fayras ee keenay xanuunka deegaankaas ka jira, si loo helo tallaalka ku habboon, iyada oo la samaynayo shaybaadh sax ah oo laga qaaday neefka xanuunku helay.
Tags: Waa Maxay Cudurka Cabeebku (FMD)?
Next post Xameetida Dhagaxa Ku Samaysmo iyo Waxyaabaha Sabbaba
Previous post Waa Maxay Af-Ruurka Adhiga (Orf Disease)?